ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ..
Posted by ဆူး on Nov 26, 2010 in Drama, Essays.. | 12 comments
ဆူး စိတ်ကူး ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ
တနေ့က ပိတ်ရက်သွားတော့.. အဒေါ်က အသုဘ အိမ်တခု သွားနေလို့တဲ့.. ပြန်လာတော့.. အဒေါ် ဘယ်သူ့ အသုဘလဲ ဆိုတော့.. ရပ်ကွက်ထဲက ဦးလှထွန်း သမီးယောင်္ကျားသေတာတဲ့.. သူတို့ ယူတာ ၁နှစ်မရှိသေးဘူး ၈လဘဲ ရှိသေးတယ်။ သနားပါတယ်။ အခုသေသွားတော့ ကျန်ရစ်သူ မိန်းမ က အရူးတပိုင်းဖြစ်နေတယ်။ အဒေါ်ပြောပြတဲ့ မြင်ကွင်းကို မျက်စိထဲမှာ ပုံဖော်ကြည့်မိတာ.. မိန်းမက ငါ့ယောင်္ကျား သေတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး.. သူအိပ်နေတာ.. ငါ့ကို သူ့ အနား မှာ နေခွင့်ပြုပါ.. ယောင်္ကျားရေ.. ရှင့်ကို ကျမ ရင်ခွင်ထဲမှာ ထားမယ်နော်.. ရှင် အိပ်နေတာ တော်ကြာ ထတော့နော်.. တော်တော် ကြာနေပြီ။ လူကြီးတွေက သူ့ကို ယောင်္ကျား အနား သွားခွင့်မပြုဘူး.. သေတဲ့ လူကို ဟိုဆွဲဒီဆွဲ လုပ်ရင် အပုတ်ရည်တွေ ထွက်ကုန်ပြီ နံကုန်မှာ စိုးလို့.. အနား ပေးမသွားဘဲ.. ဖက်ချင်ရင် ဖက်လုံးကြီး ဖက်ဆိုပြီး ဖက်ခိုင်းထားတယ်။ မိန်းမက ငိုလိုက် ရီလိုက်.. ယောင်္ကျားရေ.. နင်ကို ငါ ဆေးခန်း လိုက်ပို့ပေးမယ်.. အော်နေတယ်။
ဘေးနားက လူတွေ ပြောကြားချက်အရကတော့.. သေသွားတဲ့ လူက နေမကောင်းဖြစ်လို့.. နီးစပ်ရာ ဆေးခန်းတခုမှာ သွားပြပါတယ်။ ဆမ လက်မှတ်ရပြီးသား ဆရာဝန် အစစ်ပါ။ သူဆီမှာ ပြတော့ ဆေးထိုးပေးလိုက်တယ်။ ဆေးမတည့်တော့.. ဆေးခန်းက ပြန်လာပြီးတော့.. မျက်နှာတွေ ယောင်အမ်းနေလို့.. ဆရာဝန်ကို သွားပြောတယ် ဆရာဝန်က သူမလိုက်နိုင်ဘူး.. ခေါ်လာခဲ့.. လူမမာက မသွားနိုင်တော့ဘဲ အိပ်ယာထဲမှာ တကိုယ်လုံး အကွက်ကွက်တွေနဲ့ ယောင်အမ်းနေလို့ ဆရာဝန်ကို သွားထပ်ပင့်တယ်။ ဆရာဝန်က ပြောတယ် တသောင်းပေးမှ ကြွမယ်။ ရပါတယ် တသောင်းဆိုလည်း တသောင်း ရအောင် ရှာပြီး ဆရာဝန်ပင့်ပြီး ဆရာဝန်ကြွလာတယ် ဆိုပါတော့.. ဆေးထပ်ထိုးပေးပြီး ပြန်သွားတယ်.. နောက်တကြိမ် ဆရာဝန်ပင့်ပြီး ဆေးထပ်ထိုးပေးတော့.. ဘာမှ မထူးတာနဲ့ ဆေးရုံကို အမြန်သယ်သွားတယ်။ ဆေးရုံရောက်တော့.. သွေးပေါင်တွေ သုည အထိ ကျသွားလိုက် ၂၀ ၃၀ ဖြစ်နေလိုက်နဲ့.. ဆရာဝန် တယောက် ဆေးထိုးပေးလိုက်တော့.. ၅၀ ၆၀ ကနေ.. ၇၀ လောက် ပြန်ဖြစ်ပြီး ကောင်းမလိုလိုနဲ့.. ဆေးရုံက ဆရာဝန်က မရတော့ဘူး ခဏဘဲ ရမယ် ဆိုပြီး နောက်တော့ သေသွားတယ်။
လူကြီးတွေကတော့.. လာတဲ့ လူတိုင်းကို.. နင်တို့ တွေ့လား.. သေမှ မငိုကြနဲ့ ရှိတုန်း ချစ်ကြ.. ကြားလား.. အဲဒီလို ပြောကြတယ်။ နောက် ကြားခဲ့တာ တခုကတော့.. သူတို့ နတ်တင်တာ ကြက်ကို အသည်းအမြစ်မပါဘဲ တင်လိုက်လို့တဲ့.. နတ်ကိုင်တာ အသည်းအမြစ်မပါဘဲ တင်လိုက်တာ ဒီနေ့ ပြန်တင်ပေးမယ် ဆိုပြီး လုပ်ထားပေမဲ့.. မမှီတော့ဘူး။ လူကြီးတွေက နတ်ကိုင်လို့ ဖြစ်တာတဲ့ကွယ်.. နတ်မကြိုက်လို့.. ဆရာမှား ဆေးမှား ဖြစ်ပါသတဲ့.. နောက်ဆုံး သေလူရဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို သတ္တု ချချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဖြစ်ရပ်ကို ဖတ်တဲ့ လူတွေ သိကြမှာပေါ့. ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတာ.. လူတွေ အသိနဲ့ အတွေးအခေါ် ထဲမှာ စီးဝင်နေတာ ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ။
တွေးမိတာသာ ကွန်မန်းပေးကြပါတော့.. လူတွေ အသိ ပညာ တိုးလာအောင် ဘယ်လို လုပ်ပေးရမလဲ။
အဲဒီ ဆေးမှားတဲ့ဆရာဝန်ကို တိုင်ရမှာပေါ့။
တည့်မတည့် မစမ်းဘဲ ပေးလိုက်တာ။
လူတွေကို အသိဥာဏ်ပေးဖို့ကတော့ အများကြီးပဲ။
မကြောက်ဖို့၊ နားလည်ဖို့၊ စူးစမ်းဖို့…. အများကြီးပဲ။
အခုလို ရေးပြောဖြန့် လုပ်နေတာတွေလည်း ဒီအသိဥာဏ်ပေးရေးအတွက်ပဲမဟုတ်လား။
စိတ်မကောင်းစရာပါလား။ မြန်မာပြည်ဟာ အသိဥာဏ်နည်းသော ဆရာဝန်အတုတွေလုပ်ချင်ရာလုပ်ခွင့်ရ အာဖရိက တိုင်းပြည်ထက်ဆိုးနေပြီ။
ဆရာဝန် ဆေးမှား အွန် ပြီး လူနာရောဂါသစ်ထပ်ရပြီးဆုံးတာ
သူတို့အမှားကို ဝန်မခံတဲ့အပြင် ဟိုဟာ ထပ် စမ်း ဒီဟာထပ်စစ် လုပ် ပြီးငွေထပ် ယူသေး
နောက်ဆုံးလက်လွန်သွားတော့ ရောဂါရင့်မှရောက်လာလို့တဲ့ လူနာကိုအပြစ်ပုံချလိုက်တယ်
လူနာရှင်မိဘတွေက နိုင်ငံခြားထွက်ကုဖို့စီစဉ်တုန်း အဒီဆရာဝန်က မရတော့ဘူး ရောဂါကျွမ်းနေပြီမခံတော့ဘူးတဲ့
နိုင်ငံခြားထွက်ကုဖို့ ရည်ရွယ်ပြီးသားဆိုတော့ နောက်ဆုံး 1% ရလိုရညှား ခေါ်သွားကြတယ်
ဒါပေမဲ့ ရောဂါကြောင့် မဟုတ်ဘူး ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး က လူနာ ကိုအသက် ဆုံးလောက်အောင်ဖြစ်စေခဲ့တာ
ဆုံးသွားလို့ ဖုန်းဆက် လို့အကြောင်းစုံသိရတော့ ဆရာဝန်ကိုတရားမစွဲဘူးလား မေးတော့
သူများကို ပြသနာ မပေးချင်တာလား?
အဲဒီလို ဆရာဝန်တွေကလည်း အများသားပဲနော် တော်တော် ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် ။ ဆေးရုံေ၇ာက်တော့လည်း ဆေးရုံက ဆရာဝန်က ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ပြောမပြဘူးလား။ ပြီးတော့ ဘယ်ဆရာဝန်နဲ့ ဘာဆေးထိုးလိုက်တယ်ဆိုတာ မမေးဘူး ထင်တယ်နော်… နောက်ဆုံး နတ်ကို အသည်းအမြစ်မတင်လို့ နတ်ကိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အယူကြီးကလည်း အခုလို ခေတ်မှီနေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ အဲဒါတွေကို အယုံအကြည်ရှိနေကြတုန်းပဲလား ဗျာ…. တော်တော် စဉ်းစားဖို့ ကောင်းတယ်နော်.
ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေက ရုံးတွေ ဂါတ်တွေ ရောက်မှာ တော်တ်ာကြောက်ကြတယ်.. အေးလေ.. ကြောက်ဆို ပိုက်ဆံကလဲ သောက်သောက်လဲကုန်မှာကိုး… ဒါပေမယ့် ဒီလိုကိစ္စကိုတော့ ငြိမ်မခံသင့်ဘူးလို့ထင်တယ်.. ရဲကိုတုိုင်.. အရေးယူ.. ပြီးရင် မှုခင်းဂျာနယ်.. မဂ္ဂဇင်းတွေမှာထည့်… ပညာပေးတွေလုပ်.. ပြီးရင် ဆေးကောင်စီ ကိုတင်ပြပြီး ဆေးခန်းဖွင့်နေတဲ့ ဒေါက်တာတွေကို သေချာပြန်စီစစ်ရမယ်..
ကျွန်တော်ထင်တာကိုပြောတာပါ.. ဒါပေမယ့် ဒီမှာ အဲ့ဒီလောက် အလုပ်ရှုပ်ခံကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး…
တရားနဲ့ဖြေတတ်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ကြောင့်ပါ … သေနေ့စေ့လို့သေတာလို့ပဲ ဖြေနိုင်ကြတယ် … ရုံးရောက် ဂါတ်ရောက်ရင် သေတဲ့သူကလဲ ပြန်မရှင်လာ မှားတဲ့ဆရာဝန်လဲ ဒုက္ခရောက် … ခဏခဏလဲ ၀မ်းနည်းစရာကိစ္စကို ပြန်အမှတ်မရချင်ကြဘူး …
အဲဒီလိုမှ တရားနဲ့မဖြေနိုင်ရင်လည်း ဒေါသဖြစ်လို့ဆုံးမယ်ကိုမထင်ဘူး … ဘာပဲပြောပြော ဒီစိတ်ဓါတ်တွေကတော့ ကောင်းတယ်လို့ဆိုရမယ် …
ဗဟုသုတနည်းပြီး အယူမှား အယုံမှားတာတွေကတော့ တော်တော်ဆိုးတယ် …
နတ်ကိုင်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကြောင်တွေကိုလည်း စေတနာမဲ့ အသားမပါ အရိုးသာ ကျွေးကြလွန်းလို့ ပြန်ကိုက်မှ သိတတ်ကြမယ် မှတ်တယ်။
နတ်က အဲဒီလူသေနေ့စေ့တော့ လာခေါ်သွားလိုက်တာနေမှာ..။
ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ..။ ၀ဋ်ရှိလို့ခံရတာလေ။ နောင်ဘ၀တခုခုမှာ အဲဒီနတ်က အဲဒီလိုမျိုး ၀ဋ်လည်ပြီး ပြန်သတ်ခံရမှာပါပဲ..။
ဆရာဝန်ကိုလည်း မေတ္တာပို့ပါ။ သေရင် သရဏဂုံတင်ဖို့လည်း မမေ့ဖို့ ဘေးကလူတွေကသတိပေးပေါ့..။
ဘေးလူများအနေနဲ့ သေခါနီးလူနာမချိမဆန့်ဖြစ်နေချိန် .. တရားခွေဖွင့်ပြီး ကူညီပေးလိုက်ကြရဲ့လားမသိ..။
သေခါနီးမရဏဇောကျချိန်မှာ ..စိတ်နှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ကအလွန်အရေးကြီးတာမို့ .. ဒါဟာ.. သေခါနီးလူနာကို အကောင်းဆုံး ကူညီနည်းပါပဲ..။
နောင်.. အဲဒီလိုမျိုးတွေတွေ့ရင် ..တရားခွေနဲ့သွားပြီး စိတ်ပါလက်ပါကုသိုလ်ယူကူညီကြပါနော..။
ဆရာဝန်ကိုလည်း မပြစ်မှားကြပါနဲ့နော.. ၀ဋ်လည်နေဦးမယ်..။
ကျွန်မ မောင်တစ်ဝမ်းကွဲတစ်ယောက် ၇ နှစ်သားမှာ ဆေးထိုးမှားပြီး သေသွားဖူးတယ် … တစ်ဦးတည်းသောသားဆိုတော့ မိဘတွေကလဲ အရမ်းပူဆွေး … ဆရာဝန်ကလဲ အသေအလဲတောင်းပန်တာပဲ … တခြားသူတွေကတော့ ဒေါသထွက်ပြီး ဆရာဝန်ကို တရားစွဲခိုင်းတယ် … တကယ့်ကာယကံရှင်အစစ်က တရားစွဲနိုင်လောက်တဲ့ စိတ်တောင်မရှိအောင် သောကရောက်ခဲ့တာကို ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ဘူးတယ် …
တခြား အလားတူဖြစ်ရပ်တွေလဲ အများကြီးပါပဲ …
ယူအက်စ်မှာတော့ .. ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ .. တရားစွဲမယ်ဆိုရင် အချက်တွေအများကြီးပါပဲ.။
၁) သေတဲ့သူမှာ အသက်အာမခံရှိခဲ့ရင်.. မတော်တဆမှုနဲ့ ဆရာဝန်ကြောင့်သေတယ်ဆိုမှ ကျန်ရစ်သူတွေအသက်အာမခံငွေအပြည့်ရမှာမို့ တရားစွဲကြပါလိမ့်မယ်..။
၂) လူနာကခွင့်လွှတ်လိုက်ရင်လည်း ဆရာဝန်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းက ခွင့်လွှတ်မပေးရပါ။ နောင်လူနာတွေရရှိမှု ပြသနာဖြစ်လာမှာမို့ .. ဆရာဝန်ကို တရားစွဲခိုင်းပါမယ်။ ဒါမှမဟုတ်… ဆေးရုံဆေးခန်းကလည်းဆရာဝန်ကိုတရားစွဲပါမယ်..။
၃) ဆရာဝန်မှာလည်း လျှော်ပေးဖို့အာမခံရှိနေပြီးတာမို့.. တရားစွဲရင်လည်း အဲဒီအာမခံကပဲငွေလျှော်ပေးမှာဖြစ်တာမို့ .. ဆရာဝန်လည်း ဒီလောက်ကြီးတော့ ဘ၀ပျက်အောင် ပြသနာမတက်ပါ..။(ယူအက်စ်မှာ ဆရာဝန်တိုင်းလိုလို ..တရားစွဲတာနဲ့မလွတ်နေပါ)
၄) ဆေးသုံးစွဲရာမှာ ..ဆေးက ပြသနာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာမို့ .. ဆေးကုမ်ပဏီကလည်း သူလွတ်အောင် ၀င်စွဲတာ..ဖြေရှင်းတာလုပ်မှာပါပဲ..။
၅) နတ်တင်တာမှာ နတ်ဆရာက ကြက်ကိုအပစ်ပုံချလို့ရပေမဲ့.. တရားဥပဒေအရဖြစ်လာရင် ..ကြက်ကိုလွှဲချလို့မရတာမို့ ..နတ်ဆရာကလည်း သူလွတ်အောင် ဆရာဝန်ကို တရားစွဲခိုင်းပါမယ်..။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ..အပြစ်တွေ လူဖြစ်တဲ့သူ့ဆီလှည့်လာမှာပါပဲ..။
အများကြီးပါပဲ..။ တရားစွဲတာဟာ မုန်းလို့။ ချစ်လို့မဟုတ်.. ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ရယူလိုမှုရဲ့ သာမန်အစိတ်အပိုင်းတခုပါပဲ..။
အာမခံစံနစ် ..မြန်မာပြည်မှာ.. ဖွံ့ ဖြိုးသုံးစွဲကြဖို့ လိုအပ်နေတယ်လို့ သုံးသပ်မိကြောင်းပါ..။
တရားစွဲ တယ် မစွဲ ဘူးထက်.. မိန်းမကတော့ အရူး တပိုင်းဖြစ်နေပြီ။
လူတွေ အသိစိတ် ရင်ထဲ အသည်းထဲမှာ နတ်ကိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အရာနဲ့ စိတ်ကို ဖုံးကွယ်နေကြတာကို သဘောမကျတာ အမှန်ဘဲ။ သေသွားလို့ မတင်တော့ဘူးလား မထင်နဲ့.. နောက်လူ မသေအောင်လို့.. တင်အုန်းမှာ.. ပူပင်သောက ဘယ်လောက် များများ.. ၀တ္တရားတော့ မပျက်ဘူး။ လူတွေ ကို ဘယ်လို အသိတွေ များအောင် ပြောရမှန်းကို မသိတော့ဘူး။